Waxbar gabadha oo ciribtir faqriga: Doorka waalidiinta ee la socoshada waxbarashada carruurtooda (Taxanaha 7aad – dhegayso) – Radio Daljir
Waxbar gabadha oo ciribtir faqriga: Doorka waalidiinta ee la socoshada waxbarashada carruurtooda (Taxanaha 7aad – dhegayso)
Diseembar 31, 2019 4:25 g 0
Barnaamijka maanta waxa aan ku falaanqeyn doonaa qodobada soo socda:
Waalidiintu xil ma iska saraan la socodka waxbarashada carruurtooda iyo xidhiidhka macalimiinta iyo maamulka iskuulada?
Maxaad se kula talinlahayd waalidiinta iyo iskuulada dhanka muhiimada la socodka waxbarashada caruurtooda iyo xidhiidhka macallimiinta iyo maamulka iskuulka?
Badanaa iskuuladu waxa ay sheegaan in hooyooyinku u badanyihiin waalidiinta timaada, la socota oo soo booqata iskuulka ama yimaada marka looga yeedho amaba loo baahdo si ay ula socdaa waxbarashada carruurtooda. Maxaa sababa taas, aaway se doorkii aabbuhu?
Labada gole oo ansixiyay Miisaaniyada sanadka 2020